आजदेखि सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू, कुन नम्बर भएकाले कहिले गुड्न पाउँछ ?
काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण तीव्र भएपछि त्यसको नियन्णका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानैदेखि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) को संयुक्त बैठकको निर्णयानुसार जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा …
तीन तहको निर्वाचन एकैपटक तोक्न सर्वदलीय बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । पूर्वनिर्धारित समय अनुसार सर्वदलिय बैठक आज बिहन ९ बजे नै बस्नेछ । बैठकमा तीन तहको निर्वाचनबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल …
न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मौसम अझै खराब हुने, कहिलेसम्म यस्तै ?
काठमाडौ । नेपालमा फेरि अर्को न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले मौसम खराब बन्दै गएको छ । उक्त मौसमी प्रणालीका कारण अझै केही दिन मौसम बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागले बुलेटिन जारी गर्दै नेपालमा रहेको पश्चिमी …
आफैले खनेको खाल्डोका कारण मन्त्रीको पद नै धरापमा
काठमाडौं । सार्वजनिक मञ्चबाटै नरसंहारको धम्की दिन मिल्छ ? त्यो पनि बहालवाला मन्त्रीले ? कानुनी, नैतिकता कुनै पनि हिसाबमा मिल्दैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव यस्तै हिंसात्मक अभिव्यक्तिका कारण संकटमा परेकी छन् । त्यही कारण उनको राजीनामाको …
काठमाडौको सडकमा एकैदिन ३ मानिस मृत फेला परे
काठमाडौ । काठमाडौँको सडक पेटीमा शुक्रबार तीन व्यक्ति मृत फेला परेका छन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ भङ्गाल डेरा गरी बस्ने महोत्तरी बर्दिवासकी ४५ वर्षीया सविता थापा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ ढोकाटोलस्थित सडकपेटीमा एक पुरुष …
123 … 21,205 next »